Dambudziko reZuva reMarudzi reVakadzi rave pedyo nekona | Ndinobva mac
Dambudziko reZuva reMarudzi reVakadzi rave pedyo nekona
Apple kazhinji inotanga matambudziko akafanana pagore uye mune iyi nyaya kana kwasara mazuva anopfuura matatu chete kusvika kupera kwaKukadzi (watinorangarira gore rino riine 3) saka chinetso chinotevera cheApple Watch yatosimudza musoro wayo. Kukadzi akatotivigira kudenha kweMwedzi wemoyo uyo waive wekupedzisa ringi yekurovedza kwemazuva manomwe akateedzana, mune ino kesi ndiyo Dambudziko reZuva reMadzimai reZuva rose Vashandisi veApple smartwatch vanogona kuwana imwe menduru mukiyi yavo.
Zvekuita zviitiko zvinonetsa sarudzo yekuzvimisikidza pachedu uye pamusoro pezvose kukurudzira vese vanhu avo vanogara zvakanyanya kuti vaite maekisesaizi, kungave nekuda kwebasa kana nekuti havadi kuita zvemitambo. Nemhando idzi dzezvinokosha uye zvakapusa zvinetswa, vanhu vanogona kusungirirwa kufamba kwechinguva pazuva uye kujairira kwazviri kusvika chave chinhu zuva nezuva, kufamba kwakatinakira isu. maererano nehutano. Hazvina basa kuti umhanye marathon kuti uve neutano, uine tsika dzakanaka dzekudya uye kumwe kurovedza muviri tinogona kunakidzwa noutano hwakanaka kwazvo.
Yekupedzisira 2018 dambudziko raive rekupedzisa iyo Mhete yekufambisa kaviri mukati memwedzi, mu2019 dambudziko rakachinja uye Apple yakatikurudzira kufamba 1,6 km pazuva rimwe chete, Kurume 8, kutora menduru. Ino nguva zvinoita sekunge chinetso chinosanganisira kufamba, panguva ino tinofanirwa zviite kwemaminitsi makumi maviri. Musi waKurume 8, kana iwe uchida kuwana iri dambudziko reApple Watch, ingo enda panguva iyoyo uye iwe unowana menduru yako uye zvinamirwa zvekushandisa meseji.
Parizvino dambudziko harisi kuwanikwa pawatch, asi mumazuva mashoma anotevera ichaonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko reZuva reMarudzi reVakadzi rave pedyo nekona
Apple Tsigiro inopa vhidhiyo ine akasiyana macOS Catalina mapfupi
Coronavirus: Matanho Ekudzivirira paMusangano weVashandi veApple